को हुन् ‘सिरुमारानी’की सिरु ? – BIG FM 101.2 MHz
Home » Featured » को हुन् ‘सिरुमारानी’की सिरु ?
पोखरा ९ फागुन । पोखराको बजारमा अहिले नाटकको चर्चा ह्वात्तै बढेको छ । खासगरि नाटकघर निर्माण पछि भएको पहिलो नाटक मञ्चन र यसका कलाकारहरुलाई लिएर बजारमा चियागफ हुन थालेका छन् । गन्धर्व नाटकघरमा मञ्चन भैरहेको नाटकमा पाका कलाकारहरु माओत्से गुरुङ, प्रकाश घिमिरेसँगै नयाँ कलाकारहरुले पनि अभिनय गरेका छन् ।
नयाँ कलाकारहरुले पनि पुराना अनि पाका कलाकारहरुलाई माथ दिने गरि आफ्नो अभिनय कला देखाईरहेका छन् । नयाँ कलाकारहरुको देखिएको संभावनाले पोखराको नाट्य माहौल अझै बढि जगमगाउने निश्चित छ । यस्तै एउटी कलाकार हुन् सिरुमारानीकी महारानी, सिरु ।
पोखरामा मञ्चन भइरहेको नाटक सिरुमारानीको मुख्य पात्र सिरुको वास्तविक नाम सिमा गुरुङ हो । पोखराको टुडिखेलमा जन्मिएकी उनी हाल पोखरा लामाचौरमा बस्छिन् । उनलाई रंगमञ्चसम्म ल्याउने कार्य माओत्से गुरुङले गरे । कलाकारको रुपमा उनी पोखरा थिएटरमा आइपुगिन् । उनलाई सुरुमा सुन्दरीको भुमिका दिने तयारी थियो । तर उनीमाथी थिएटरको विश्वास बढ्यो । फलस्वरुप मुख्य भुमिकामा उनी देखिइन् । सिरुमारानी मार्फत आफ्नो अभिनय क्षमता देखाएकी उनलाई अभिनय सम्बन्धी भोक झनै जागेको छ । ‘एक्टिङ गर्ने भोक थियो, अझै भोक जागेको छ’ हाँस्दै उनले भनिन् । अब निरन्तर थिएटरको माध्यमबाट नाट्यप्रेमीमाझ देखिने तयारी उनको छ । ‘नाटकमा सबै कलाकारको भुमिका उत्तीकै हुने भएकोले आफुलाई फिट हुने भुमिका पाएमा म निभाउँछु’ उनी वाचा गर्छिन् । ‘कुनै नाटकमा म फिट नहुन पनि सक्छु तर फिट हुने ठाउँ छ भने म अभिनय गर्छु’ उनले थपिन् । उनको अर्को लक्ष्य सर्ट मुभि बनाएर फिल्म फेस्टिभलमा पठाउने छ ।